Ankarihary | mandimby maharo
Posted on 3 October 2012 by Mandimby Maharo
Hanao fihaonana mivantana ka halefa amin’ny fahitalavitra i Barrak Obama sy I Mitt Romney anio hariva. Any Denver, Colorado no hanaovana ity fifanatrehana ity amin’ny 07 ora any antoerana (01:00 GMT). Haharitra 90 minitra ity resaka ity ary tombanana ho 52 tapitrisa ny hanaraka izany. Fihaonana voalohany amin’ny telo izay tsy maintsy atao mialoha ny ifidianana amin’ny 06 novambra moa ity tanterahina 34 andro mialoha ity.
Hiompana betsaka amin’ny raharaha anatiny moa no lohahevitra ho resahina anio. Ny toekarena sy ny asa, ny fahasalamana sy ny sosialy, ny anjara andraikitry ny fanjakana amin’ireo rehetra ireo no tena andrasana valiteny avy amin’ireto kandidà ireto. Hafana noho izany ity ady hevitra izay ho entanin’i Jim Lehrer, mpanao gazety efa matihanina amin’ny fampihaonana toy izao ity. Na dia efa fomba fanao any Etazonioa manko ny toy izao dia anisan’ny fotoana lehibe ho an’ireo mpifidy sy ireo mpilatsaka ho fidiana satria mety hampiova betsaka ny fironan’ireo mpifidy ny fahaizan’ireo mpandahateny mandresy lahatra azy. Raha ny tombana natao mialoha izay fihaonana izao aloha dia latsaka ny kandidà Mitt Romney satria dia 47% ny mpifidy ihany no resy lahatra amin’ny tetikasany. Anio izany no ahitana valiny amin’ireny fanontaniana maro teraka taorian’ireo horonan-tsary sy boky miresaka na manaratsy ny tsirairay avy ireny.
Endriky ny demokrasia mivantana ny fifanatrehana toy izao. Maro ireo firenena lehibe manao toy izao. Niarahana nahita ireny ady hevitra teo amin’ny Nicolas Sarkozy sy François Hollande ireny. Izany no midika fa manana ny anjara toerany lehibe ny Serasera sy ny asa fanaovan-gazety eo amin’ny fiainam-pirenena. Endrika isehoan’ny fifanadraisana akaiky sy ny fandraisan’ireo panao politika ho zava-dehibe ny vahoaka koa izao ka anekeny ny ho adinina mivantana.
Raha ny eto Madagasikara aloha dia mbola lavitra ny ezaka tsy maintsy atao. Niarahana nahita ihany ireny firesahan’ny Fat mivantana tamin’ny fahita lavitra teto andrenivohitra ireny.Olona aman’aliny ihany no afaka nahita izany. Marobe ihany koa ny mba naniry ny hahita mivantana tamin’ny fahitalavitra na hihaino mivantana izay ady hevitra tany amin’ireny fihaonana tany ivelany mba andaminana ny olana eto Madagasikara izao. Saingy ny mifanohitra amin’izay no hita. Nafenina hatramin’ny toerana nanaovana ilay fivoriana aza moa no niafarany tamin’ireny fihaonana tany Seychelles farany ireny.
Raha ny anio aloha dia ireo avy ao amin’ny Vondron’OloTsotra no milaza fa hanao ampamoaka. Vondrona izay fatatra ihany fa manohana ny filoha teo aloha. Mazava ho azy araka izany fa tsy maintsy handeha ila ihany ny famoahana ny resaka mahamaivay eto an-tanana. Dia samy maniry ny hisian’ny tena fihaonan’ny roa tonta, Andry Tajoeline sy Marc Ravalomanana, fototry ny disadisa ny rehetra ka mba afahany mamantatra ny tena fositra. Mety hisy toy izao any Etazonia izao ve eto amitsika mialoha ny fifidianana kasaina ho atao?
Tags: Andry Rajoelina, Barak Obama, Etazonia, marc ravalomanana, Mitt Romney, politiqueCategories: Média, politique